Pradesh News | » आइसोलेसन बेड पुग्दो बनाउन नसक्नु कमजोरी भयो आइसोलेसन बेड पुग्दो बनाउन नसक्नु कमजोरी भयो – Pradesh News
आइसोलेसन बेड पुग्दो बनाउन नसक्नु कमजोरी भयो
कोरोना कहरले प्रदेश १ लाई नराम्ररी सताएको छ । त्यसमा पनि राजधानी विराटनगर निकै प्रभावित छ । प्रदेश १ मा तीन हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । संक्रमित मध्ये प्रदेश १ भित्रका २३ जना र बाहिरका ९ जनाका गरी ३२ जनाले मृत्यु भएको छ । सरकारी तयारीकै कारण प्रदेशमा भयावह अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । प्रदेशमा आइसोलेसन बेड अभावको पिरलो उच्च भएका बेला सरकार के गर्दैछ ? कोरोना कहर छिचोल्न प्रदेशका योजना के छन् ? भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग पत्रकार राजु अधिकारीले गरेको कुराकानी।
गत आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड–१९ को महामारीकाबीच पनि हामीले उल्लेख्य खर्च गर्यौं । समग्र खर्च प्रगतिमा प्रदेश १ नै अगाडी रह्यो । यसबाट हामी भन्न सक्छौं कुनै बहाना नगरी काम गर्ने हो भने हामी जस्तो सुकै संकट, चुनौतीकाबीच पनि काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको तथ्य प्रष्ट भएको छ । त्यसैले हामी कोरोनाको बहानामा ठप्प भएर बस्दैनौं हाम्रा सबै कामहरू अगाडी बढ्छन् । यो अन्तर्वार्ता नागरिक दैनिकबाट लिएको हो ।